होली खेल्दै गर्दा किरण केसी (राता मकै)लाई युवतीले दह्रो झापड हानेपछि…. – Setosurya
होली खेल्दै गर्दा किरण केसी (राता मकै)लाई युवतीले दह्रो झापड हानेपछि….
ललितपुर – ललितपुरको इमाडोलमा २०१४ असार १५ मा जन्मिएका हास्यकलाकार किरण केसी अहिले बुढेसकालले छुन लागेको बेलामा पनि होली भनेपछि असाध्यै रमाउछन। उनी इमाडोल गाबिसका स्थायी बासिन्दा हुन्। रंगहरुको पर्व अर्थात फागु पूर्णिमाको दिन उनी दिनभर रंगहरुसँग खेलेरै बिताउँछन् ।
तन्नेरी उरन्ठेउला उमेरमा उनले लुकेर केटीहरुलाई पानी छ्याप्नेदेखि जबरजस्ती र छक्क्याएर अबिर दलेर भाग्ने काम पटक–पटक गरे । अहिले सम्झदासमेत मन निकै आनन्दित हुने र केही लज्जाभाव पनि आउने भन्दै उनले आफ्नो विगतका कुरा कोट्याउन थाले।
केसीले भने, ‘ त्यसरी होली खेल्दाको अनुभव निकै रमाईलो हुन्थ्यो ।’ त्यसरी नै रमाईलो गर्ने क्रममा उनले एउटी युवतीको दह्रो झापड भेटेका थिए। उक्त घटना उनले अहिलेसम्म पनि बिर्सेका छैनन्। ‘हरेक वर्ष आउने होलीको दिनले झन् उक्त घटनालाई ताजा बनाउने गर्छ, कसरी बिर्सन सक्छु र त्यो घटना म, उनले भने। अझ थप्दै उनले भने ‘ त्यस्तो कुरोलाई मैले कहाँ सजिलै बिर्सन सक्छु र , अहिले पनि घटना सम्झँदा गाला रनन भएर आउँछ ‘
यो घटना आज भन्दा करिब २७ वर्ष अगाडीको हो। तत्कालीन इमाडोल गाबिस वडा नं. २२ निवासी एउटी केटी निकै राम्री थिइन् । कहिले होली आउला र उनलाई रङ दलुँला भनेर उनी कल्पनाको सागरमा डुब्ने गर्थे। होली पनि आयो। होलीको दिन मौकाको फाइदा उठाउदै केटीलाई समातेर अनुहारभारी रङ दलिदिए, केसीले।उनले सोचेका थिए, केटीले पनि उनको गालामा पनि उसैगरी दलिदेली भनेर। तर, वास्तविकतामा त्यस्तो भएन। केटीले उनको गालामा रङ दल्नुको सट्टा कसेर चड्कन हानेर गई।
‘त्यो चड्कन खाएर चेतेपछि मैले थाहा पाएँ कि कसैलाई पनि जबरजस्ती रङ दल्न हुँदो रहेनछ ।’ त्यस घटना पछि आजसम्म कसैमाथि इच्छा विपरित रंग दलेको , लोला र पानी हानेको छैनन्। र उनले सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दै भने, ‘ यो खुसीको पर्व हो, इच्छा विपरीत कसैलाई पनि कहीँ नगरौँ र अवाञ्छित गतिविधिहरु पनि नगरौँ।
श्रोत – पाथिभरा टिभी
पत्रकारलाई ११ हजारको खसी
“सातै प्रदेश ७७ जिल्ला, बामपन्थीको बन्दैछ लालकिल्ला” हेर्नुहोस् अति मिठो चुनाबी गीत (भिडियो सहित)
हिजोको नेपाल आईडल हेर्नुभयो ? छुटेको भए पुनः हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
पति अर्कैसँग लागेपछि चर्चित नायिकाले गरिन् आत्महत्या
खत्तम तिज गित गाउनेलार्इ कलाकार बिनाेद र सम्झनाकाे खबरदारी, हेर्नुहाेस् भिडियो……
प्रधानमन्त्रीका नब्बे दिनः के-के भए उपलब्धि ?
महंगोमा बिक्यो ‘छक्का पञ्जा फेरि’ को ग्लोबल राइट्स
चुनावी गीत : अघि बढ केपी ओली जनता तिम्रो साथमा छ ! भिडियो सहित
पोर्नस्टार बताएर चर्चामा आएकी अर्चनाले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरिन्…..!
स्याङ्जा र पर्वत बीच भएको भलिबलको फाइनल खेल
बादल ले पार्दै छन् एमाले लाई यस्तो अप्ठेरो ! माओबादी भित्र नै होहल्ला
एमाले नेता बिजय गुरुङ्ग भन्छन –‘परिर्वतन चाहनेहरुले बामगठबन्धनलाई मतदान गर्नेछन’
स्वयम्भूमा गोली चल्यो, अपहरणकारी घाइते, प्रहरीद्वारा तीन जना सकुशल मुक्त
कांग्रेस,माओवादी, मधेसी मोर्चा र भारतीय दूतावासले मोर्चाबन्दी गरेपछि एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक बस्दै
भरतपुरमा पुनः मतदानबिरुद्ध काठमाडौंमा एमालेको प्रदर्शन
ओली, प्रचण्डलाई झलनाथ खनालको यस्तो च्यालेन्ज, जहाज डुबाउने खेल खेल्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव
सरकार चुनावबाट भाग्दै, स्थानीय विकास मन्त्रीले गरे स्थानीय चुनाव नगर्ने संकेत
शृङखला ‘मिस वर्ल्ड’को अन्तिम १२ मा